Matipi uye madiki ekuti ungachenese sei huni zvakasikwa | Green Renewables
Nguva zhinji isu tinofanirwa kuchenesa kicheni uye isu tinogara tichitya kutanga nechinhu chimwe: kuchenesa ovhoni. Kazhinji, zvigadzirwa zvekuchenesa zvinofanirwa kushandiswa nenzira ine hungwaru kuitira kuti tirege kukuvara kana kuzarirwa nemweya une chepfu isu tichiwacha. Naizvozvo, iwe unofanirwa kuziva kuti ndezvipi zvigadzirwa zvaunosarudza kubva pakati pemamiriyoni pamusika.
Mune ino post, isu tichaenda kukutsanangurira iwe kuchenesa sei hovhoni nenzira inoshanda uye kudzivirira kukuvadza nharaunda kana chimiro chemudziyo.
1 Zvigadzirwa zvekuchenesa zvakakodzera
3 Soda yekubheka uye sanganisa nevhiniga
4 Mbiriso, munyu uye ndimu
Zvigadzirwa zvekuchenesa zvakakodzera
Kuti uchenese ovhoni, iwe unofanirwa kuziva nzira yekusarudza kubva kuzviuru zvezvigadzirwa pamusika wacho. Kune dzimwe nzira dzechisikigo dzakangoshanda senge makemikari uye nemhedzisiro yakanaka kwazvo. Dambudziko guru rinomuka nemakemikari zvigadzirwa nderekuti vanowanzo shatisa maziso, mucosa uye vanosiya munhuwi usingafadzi kwete mukicheni chete, asi nemba yese.
Zvinhu zvakasikwa zvave zvichishandiswa mumba kwehupenyu hwese kuchenesa uye nhasi, tiri kuzoshandisa zvigadzirwa izvi kuchenesa ovhoni. Kazhinji, patinotaura nezvezvisikwa zvigadzirwa zvinoita kunge zvakanetsa uye kuti hazvishande. Izvo zvakafanana nezvirwere. Mushonga unogadzirwa nemakemikari unogara uchisarudzwa kushandisa mishonga yechisikigo isina hunobudirira. Nekudaro, mune ino kesi, zvinoratidzwa kuti izvi zvigadzirwa zvakasikwa zvakangofanana uye pamusoro pazvo hazvizokuvadza nharaunda kana kusiya mweya une chepfu kumba.
Iwo madzimambo ekuchenesa kwepanyama ndimuvhiniga. Kana tikaperekedza zvigadzirwa izvi ne bicarbonate, tinowana musanganiswa unoshanda kwazvo. Bicarbonate chigadzirwa chemakemikari asi chine kushandiswa kusingakuvadzi uye inowanzo kutorwa muzvinwiwa zvinotapira kurapa gasi remudumbu uye kusagadzikana kwakawanda. Iko kusanganisa kune mukurumbira wakanaka wekubvisa mafuta ese nemarara kubva muchoto. Iri ibasa rinofanirwa kuitwa kazhinji pamba asi rinogara riine husimbe.
Kuchenesa ovhoni, vhiniga, kunyangwe kana iwe usingafarire kunhuhwira zvachose, ishamwari inogona. Iine akasiyana antibacterial uye disinfectant zvivakwa, saka zvakare inoshandiswa zvakanyanya kuchenesa michero nemiriwo usati waidya. Sarudzo yakanaka ndeyekugadzirira pfapfaidzo nehombodo yemvura nevhiniga musanganiswa. Isu tinochengetedza chiyero chezvikamu zvitatu zvemvura uye chete 3 yevhiniga. Nenzira iyi, musanganiswa hauzonhuwa zvakaipa.
Iwe haufanire kunetseka kana ichinhuwirira sevhiniga pakutanga, sezvo iri hwema hunoenda nekukurumidza. Mushonga uyu unoshandiswa kumwaya madziro ehovhoni. Kuti tiite izvi, isu tinozoishandisa uye rega iite kwemaminetsi mashoma. Kana imwe nguva yapfuura, tichaisuka nemvura uye toona mhedzisiro.
Kana hovhoni isina kunyanya kuchena, hazvizove zvakakosha kuita kwakadzika kuchenesa. Ingoita chimwe chinhu nekukurumidza. Tinogona kuzadza tireyi nemagirazi maviri emvura inopisa uye 2 yevhiniga. Isu tinoshandura hovhoni kuita madigiri mazana maviri uye tinoisiya ichimhanya kwemaminitsi makumi matatu. Mushure meizvozvo, tichapukuta jira nyoro pamadziro eovheni, pagirazi, nezvimwe. Iwe unozoona kuti iyo steam kubva muvhiniga ichave yakanyanya kudarika kuti tsvina yese ibude yega.
Soda yekubheka uye sanganisa nevhiniga
Soda yekubheka ine nhamba isingaverengeke yekushandisa mumba. Icho chigadzirwa chakachipa kwazvo zvekuti tinogona kuchiwana chero kupi. Tichazotsanangura nzira yekuchenesa ovhoni nesoda yekubheka. Iwe uchafanirwa kumwaya iyo zvakananga pazasi kana paine zvisaririra zvekudya zvakanamirwa uye pfapfaidza mushure mezvo nemvura nevhiniga spray yatataura pamusoro apa.
Imwe nzira iri nyore yekushandisa kubheka soda kugadzira pasita nesoda yekubheka, mvura, uye vhiniga. Iyi peta inoita kuti inamate zvirinani uye inogona kushandiswa pamadziro ehovhoni. Unongofanira kuisa mbiya ine mapuniki gumi esoda, 10 yemvura inopisa uye 4 yevhiniga. Nemusanganiswa uyu, tinowedzera vhiniga zvishoma nezvishoma, nekuti ichaita kupomhodza furo. KANA tikaona kuti musanganiswa wakanyanyisa mvura, tinowedzera imwe bicarbonate.
Tevere, isu tinoparadzira musanganiswa mukati mehovhoni uye isu tichaisa kusimbisa kwakawanda munzvimbo dzakasviba kana dziine chikafu chinosara. Tinorega musanganiswa wacho uchishanda kwemaawa mashoma. Kana iyo tsvina yakakwira zvakakwana, isu tinoisiya iyo husiku. Hatidi kukwiza, nekuti nemusanganiswa uyu, tsvina inobuda iri yega. Kana tichida kukurumidzisa maitiro nekuti tine nguva shoma, tinobatidza ovhoni uye tinoisiya ichiita kwechinguva nemusanganiswa mukati. Izvi zvichaita kuti tsvina iri muchoto ibviswe nekukurumidza.
Mbiriso, munyu uye ndimu
Icho chimwe chigadzirwa chinobatsira kuchenesa ovhoni. Iyo mukanyiwa iyo yatakamboita nesoda yekubheka uye vhiniga inogona zvakare kugadzirwa nembiriso nevhiniga. Uyu musanganiswa haushandiswe zvishoma, sezvo zvichidikanwa kushandisa yakawanda mbiriso. Soda yekubheka inosarudzwa nekuti inokurumidza uye inoshanda. Nekudaro, isu tichaenda kutsanangura maitiro ekuchenesa ovhoni nembiriso.
Ingo gadzira musanganiswa senge yapfuura iyo patinozowedzera magirazi emvura nevhiniga muchiyero chakafanana nepakutanga, asi nembiriso kusvikira musanganiswa wacho wanyanyisa kana kushomeka kunge bota.
Kana tisina vhiniga mumba, tinogona kushandisa munyu wakakora. Tinogona zvakare kuushandisa kana munhuwi wevhiniga uchitinetsa kunyanya. Tinogona kutsiva vhiniga kuti ive munyu, inovawo mishonga inouraya utachiona. Zvinotibatsira kubvisa hwema hwakaipa, kunyanya kana takagadzirira hove muchoto. Tichafanira chete kusiya tireyi tireyi, kuwedzera munyu pamwe muto wemonimu uye svuura uye regai zviite. Zvakanakisisa kushandisa kupisa kwakasara mushure mekushandisa hovhoni kugadzira hove.
Nenzira iyi, unogona kuchenesa ovhoni pasina chero hwema husingafadzi. Steam inobatsira kubvisa tsvina nyore.
Ndinovimba kuti nematricks aya unoziva kuchenesa ovhoni isina makemikari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Kumba Economics » Kuchenesa sei hovhoni
Tsanangudzo yekusimudzira kwakasimba